I-villa yonke e-Ouarzazate - I-Airbnb
I-villa yonke e-Ouarzazate
Ouarzazate, Souss-Massa-Draa, i-Morocco
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Guy
Ukuze iqashwe ngokugcwele, le villa ebukekayo ithokozela indawo engasechibini eyingqayizivele futhi yasendle. Ingadi enezinkuni, ichibi lokubhukuda, ama-kayak ... Imisebenzi eminingi yezivakashi etholakalayo. Endaweni: amakamela, izinqola, ukuhamba ngezinyawo njll. Isexwayiso: izinga lechibi liyahlukahluka nezinkathi zonyaka.
Amakhilomitha angu-20 ukusuka e-Ouarzazate, i-villa kanye nephuli kuhlangabezana nezidingo zabavakashi abaqaphelayo abafuna ukuzola nabafisa ukushajwa kabusha. Kulokhu sikhethe i-decor ephefumulelwe i-Berber ngasikhathi sinye ntofontofo futhi iyitoho. Ukufinyelela kwayo okuyingqayizivele nokuqondile echibini kuyimpahla yayo emikhulu, futhi i-panorama yayo engu-180 ° ihlanganisa uchungechunge lweqhwa lwe-Atlas.
Ikhishi likhona, kodwa sikhuthaza ukusetshenziswa kwesitofu. Lokhu kushibhile futhi kwenza ukuphila kube lula ngempela. I-villa inamakamelo okulala ama-3 anombhede ophindwe kabili, ikamelo lokulala eli-1 elinemibhede emi-2 yabantu abangabodwa, namagumbi okulala ama-2 anombhede ophindwe kabili kanye nombhede owodwa. Igumbi ngalinye linendawo yalo yokugezela.
Igumbi lokuhlala eliphindwe kabili linendawo yokufunda noma yokubuka ithelevishini.
4.86 · 162 okushiwo abanye
Le ndawo yokuhlala ibamba ukushuthwa kwezihlabani zamamuvi ngezikhathi ezithile ezitudiyo zika-Ouarzazate (uBrad Pitt, u-Orlando Bloom, u-Angelina Jolie, uSteven Spielberg, ... ukubala abambalwa.)
Imisebenzi etholakala endlini: izikebhe, ama-quads, amakalishi, amakamela, ukuhamba ngezinyawo, amahhashi, ukudoba, ukubhukuda ...
Le ndawo inikeza inqwaba yemisebenzi yezokuvakasha nezamasiko, iqala ngezitudiyo zamabhayisikobho lapho inqwaba yama-blockbusters eshiye izinsalela ngemva kokudlula.
I-Valley of Roses, intende yesandla se-Ouarzazate, i-Fint Oasis kanye ne-kasbah yase-Ait Ben Haddou (amagugu e-UNESCO) atholakala kalula. OkwamaDades gorges noma iToghra kufanele kuhlinzekwe ngosuku.
I-Draa Valley kanye nezindunduma zaseMerzouga Mahmid noma zidinga okungenani usuku olulodwa esizeni.
Ngihlala endaweni yangasese engekude ukuze ngingaphazamisi ubumfihlo bezivakashi ngesikhathi sokuhlala kwazo. Kepha ngihlala nginakho 24/24 ukwenza lula ukuhlala kwakho.